Maitiro ekuisa kana kuumbiridza mafirita, plugins uye zvinowedzeredzwa muGIMP | Linux Vakapindwa muropa
GIMP inoyevedza yemufananidzo mupepeti iyo ine zvishoma yekugodora iyo Photo Shop pachayo, iine akafanana akafanana uye ehunyanzvi maturusi. Zvakawanda zvekuti vamwe nyanzvi vakasarudza kushandisa chirongwa ichi senzira yakanaka kune PhotoShop, kunyangwe paWindows kana mamwe mapuratifomu. Pamusoro pekushanduka kwayo uye simba, GIMP zvakare ine imwe bhenefiti: ndeye mahara uye yemahara, zvichienzaniswa nerezinesi rinodhura iro vanokwikwidza naro vanowanzove naro.
Imwe mukana weGIMP ndewekuti unogona kuwedzera kugona kwako pamusoro peaya atove akaenzana uye izvo zvinokokerwa nekuti izvo zvinowedzera izvo zvinowedzera mashandiro, mapini matsva uye mafirita anogona kuverengerwa kuve nemhedzisiro uye mabhurasho ehunyanzvi. Kune izvi tinogona kuisa zvese izvi zvishandiso zviripo izvi tinogona kuzviisa kana kuzvinyora sezvandichazotsanangura muchinyorwa chino, kana tangove nechirongwa cheGIMP chakaiswa pane yedu system.
Kufunga kuti iwe watove neGIMP yakaiswa pane yako system, unogona kuzviita nekuzvirodha pasi nekumisikidza wega mune yazvino vhezheni iyo yaunogona kuwana pane yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti kana kushandisa mapakeji mamaneja ako ekuparadzira kuisa zviri nyore iyo vhezheni inowanikwa mumadura. Paunenge wapedza, ku wedzera kubva kuzvitoro yekuwedzera / plugins isu tinogona kuzviita seizvi (zvinoenderana nekugovera kwedu nemumwe weiyi mirairo):
Pane kudaro, kana tichida kuumbiridza, Isu tichafanirwa kunge takaisa dzakateedzana zvinoenderana senge zveDebian uye zvigadzirwa:
Uye zveCentoOS / RHEL uye zvigadzirwa:
Uyezve, chero iyo distro, isu tinofanirwa kuumbiridza iyo git repository, semuenzaniso, yenyaya iyi:
Nezve magadzirirwo, isu tinogona zvakare kuvabata nekuita anotevera matanho ...:
Uye kana uchinge waburitswa, unofanirwa kuenda kuGIMP uye kubva kuFilters menyu, unogona kuiwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekuisa kana kuumbiridza mafirita, plugins uye ekuwedzera muGIMP
Gimp chirongwa chakakura, zvisinei kuti uwane kugona kwayo kwakazara unofanirwa kudzidza gwara kana mini-kosi kuti unzwisise zvakanaka. Kwaziso, yakanaka kwazvo chinyorwa.
Ndingaite sei kuti ndiise iyo gimp plugin registry pane linux? Ndiri kuyedza kudzidza iyo gimp yatove kunze, zvekugona kudzima zvinhu kubva pamufananidzo uye ini handina plugin yakaiswa.